China SEBIC 26 nke anụ ọhịa ahụ na-ewu ewu n'okporo ụzọ egwuregwu egwuregwu ike dị elu eletriki igwe eletriki igwe eletriki na ndị na-emepụta igwe | Funncycle
SEBIC 26 nke anụ ọhịa ahụ na-ewu ewu n'okporo ụzọ egwuregwu ụdị ike dị elu igwe eletriki eletriki
Moto Brushless, 48V 500W Rear Motor
Max Speed 30-50km / h, 40KM / H ma ọ bụ karịa
Nọmba nlereanya BEF-ID26RF
Ụba 26 * 2.125 ″ alloy alloy 6061, TIG gbanwere
Ndụdụ nkwusioru 26 * 2.0 ″, Alloy + Alloy
Taya INNOVA 26 * 2.125 ″ A / V Black
Batrị 48V 13AH, Lithium Batrị, na 2A chaja-SANS
Ahụmahụ ịgba ígwè na a ọhụrụ ụzọ na 26 nke anụ ọhịa ahụ Electric Bike na Black. Gbọ ịnyịnya ígwè a na-agba ọsọ ọsọ ọsọ 7 nwere ihe aluminom na nke a na-agba ọsọ ga-eme ka ị gaa ebe ọ bụla ịchọrọ ịga nke ọma. Ọ nwekwara n'ihu na azụ disk brekị. E-bike a na-abịa na batrị (ike nke 13Ah) na chaja. Site n'enyemaka nke ngosi LED anyị, ị nwere ike ịhọrọ ọsọ ọsọ ga-adịrị gị mma site na enyemaka atọ. Nwee ike ịbanye na ọchịchọ obi gị mgbe ị na-aga ebe ịkwesịrị ịga ngwa ngwa n'oge na-adịghị anya na 48v 500 watt moto! E-igwe kwụ otu ebe a zuru oke maka ịme ka ụtụtụ gị na-aga njem ma ọ bụ na-atụrụ ndụ na-atọ ụtọ ka ọ dị mfe ma na-atụrụ ndụ. Enwekwaghị ihe na-agba ịnyịnya ịnya ogologo oge mgbe ị nwere 26 inch Electric Bicycle. Igwe eletrik a ga - eme ka ị tụgharịa isi ka ị na - aga n'ihu.
Onye ahia: Achọrọ m ịnọ ọdụ n'ihi na anaghị m arịa azụ mgbu n'ihi eziokwu nke ọnọdụ na-ezighi ezi. Dị ezigbo mma, nke mara mma, na atụmatụ ndị zuru oke. Ọ masịrị m na ọ dị ka ihe pụrụ iche ma e jiri ya tụnyere igwe eletrik eletrik ndị ọzọ. Batrị dị mma, na ịnweta ngwa ngwa. Oche ahụ dị ka ihe dị mma na nnabata. Azụrụ m ịnyịnya ígwè abụọ a maka mụ na nwunye m ka anyị nwee ike ịgba ịnyịnya iri na anọ site n'ụlọ wee gaa n'ụsọ osimiri wee pụta iji nwee obi ụtọ ikuku. Enwere m mmasị igwe kwụ otu ebe ma na-agbago ya ọ dịkarịa ala ugboro abụọ n'izu.
Nke gara aga: SEBIC 700c kpochapụwo agagharị diski breeki n'okporo ụzọ obodo ebike
Osote: SEBIC 26 nke anụ ọhịa anụ ọhịa abụba na-ama nri osimiri n'etiti igwe eletriki igwe eletriki